अधिकांश मूलधारे मिडिया र टिभी कुकुरहरुको हातमा गएको छ, पत्रकारिता के हो बिर्सिसकेको हुनसक्छ : रविशकुमारको म्यागासेसे अवार्ड स्पिच – MySansar
अधिकांश मूलधारे मिडिया र टिभी कुकुरहरुको हातमा गएको छ, पत्रकारिता के हो बिर्सिसकेको हुनसक्छ : रविशकुमारको म्यागासेसे अवार्ड स्पिच
सरकारविरोधीका रुपमा भारतको सत्तारुढ पार्टीको आलोचनाको तारो बनेका भारतीय टेलिभिजन पत्रकार रविशकुमारले प्रतिष्ठित म्यागासेसे अवार्ड पाए। अवार्ड समारोहमा उनको स्विचले भारतको मूलधारे पत्रकारिताको धज्जी उडायो। हाम्रो मूलधारे पत्रकारितालाई पनि यसले कहीँ केही सम्बोधन गरे झैँ लाग्छ। उनको स्पिचको पूर्ण पाठ अङ्ग्रेजीमा यहाँ क्लिक गरी पढ्नुस्। यहाँ केही अंश भावानुवाद गरिएको छ।
भारतले चन्द्रमालाई जितेको छ। यो धेरै गर्वपूर्ण क्षणमा, म चन्द्रमा र एकै साथ मेरा खुट्टा मुनि भूमिमा हेर्दै छु। मेरो सडकमा क्रेटरहरू र खाल्डाहरु छन् जुन चन्द्रमा भन्दा बढी छ। विश्वभरि, दिउँसै लोकतन्त्रहरु आगोमा छन् र चन्द्रमाको शीतलतालाई तृष्णा गरिरहेका छन्। तर यो आगो केवल शुद्ध र साहसी सूचनाहरुले मात्र निभाउन सकिन्छ। हाम्रो सूचना जति शुद्ध छ, त्यति गहिरो हुन्छ हाम्रो विश्वास।
देश सही सूचनाले बन्छ। अर्कोतर्फ मिथ्या (फेक) समाचार, प्रोपागान्डा र गलत इतिहासले सधैँ भीडहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ।
हामी परीक्षणको समयमा बाँचिरहेका छौं पत्रकार र साधारण नागरिकको रूपमा। हाम्रो नागरिकता आफै अहिले परीक्षणमा छ र यस बारे कुनै गल्ती नगर्नुहोस्, हामीले लड्न आवश्यक छ। हामीले नागरिकको हैसियतमा हाम्रो कर्तव्य र जिम्मेवारीहरूमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ। म विश्वास गर्दछु कि आजको समयमा जब हाम्रो नागरिकतामा हमला सबै घेरिएको छ र राज्यको निगरानी गर्ने उपकरण पहिलेभन्दा बढी दबाबपूर्ण छ, व्यक्ति वा समूह जो यस आक्रमणलाई रोक्न सक्षम हुन्छन् र यसबाट अझ उत्रन सक्ने हुन्छन्। उनीहरुले नै असल नागरिकको जग बनाउन सक्छन् र हुनसक्छ भविष्यमा राम्रो सरकारको पनि।
हाम्रो संसार पहिले नै यस्तो दृढ नागरिकहरूले भरिएको छ जुन व्यापक घृणा र उत्पादित सूचनाको सुख्खाको बाबजुद पनि, लड्ने अठोट गरेका छन् र उजाड मरुभूमिको बीचमा फक्रिएको क्याकटस फूल जस्ता छन्। एक्लै उभिएर र चारै तिर सदाको लागि मरुभूमिले घेरिएको, क्याक्टसले यसको अस्तित्वको अर्थको बारेमा सोच्दैन: यो सम्भव छ भनेर तपाईंलाई यो बताउन त्यहाँ उभिएको छ। जहाँ जहाँ प्रजातन्त्रको उर्वर मैदानहरू मरुभूमिमा रूपान्तरण भइरहेको छ, नागरिकताको अभ्यास र दावीको लागि लडाई – र सूचनाको अधिकारको लागि लडाइँ खतरनाक भएको छ तर असम्भव छैन।
प्रभावकारी नागरिक हुनको लागि प्रमाणित सूचनाहरुको मुक्त प्रवाह आवश्यक छ। राज्यले आज मिडिया र कर्पोरेसनहरुमा पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गरेको छ। मिडियामा यो नियन्त्रणको प्रभावले तपाइँको सूचना प्रवाहको दायरा सीमित र संकीर्ण बनाइदिन्छ। अर्को शब्दमा, मिडियाले समाचार कथाहरूको विविधता नियन्त्रण गर्दछ, र समाचार घटनाहरूको व्याख्या स्वीकार्य हुने कुरा तोक्छ। मिडिया अब राज्यको निगरानीको एक हिस्सा हो। यो अब चौथो अङ्ग हैन, पहिलो अङ्ग हो। निजी मिडिया र सरकारी मिडियाको फरक हराइसकेको छ। यसको काम विचारको विविधता बनाउने हैन, नियन्त्रण गर्ने हो। यस्तो भारत र विश्वका कयौँ देशमा भइरहेको छ।
समाचार च्यानलका बहसहरू बहिष्कृत राष्ट्रवादको शब्दावली भित्र हुन्छन् जहाँ उनीहरूले राष्ट्रको सामूहिक इतिहास र स्मृतिलाई सत्तारुढ पार्टीको श्रोताको ठाउँमा राख्छन्। यो समाचार ब्रह्माण्ड कथामा दुई प्रकारका व्यक्तिहरू छन्: अराष्ट्रवादीहरु र हामी। यो क्लासिक “हामी” र “उनीहरु” टेक्निक हो। उनीहरूले हामीलाई भने कि एन्टि-राष्ट्रियतासँग समस्या भनेको उनीहरूले प्रश्नहरू सोध्छन्, असहमत हुन्छ, र विद्रोही हुन्छन्। असहमति भनेको प्रजातन्त्र र नागरिकताको आत्मा हो। प्रजातान्त्रिक आत्मामा हरेक दिन कठोर आक्रमण हुन्छ। जब नागरिकता खतरामा छ वा जब यसको अर्थ परिवर्तन गरिएको छ, तब के हुन्छ पत्रकारको पत्रकारिताको प्रकृति? दुबै नागरिकहरू: उनीहरू जसले राष्ट्रको रूपमा बोल्ने दावी गर्छन्, र तिनीहरूको उपहासको सिकार भए।
विश्वमा धेरै देशहरू छन् जहाँ न्यायपालिकालाई पनि सहयोग गर्ने यस शासनले जनतामा वैधानिकता पाएको छ। र अझै, जब हामी हङकङ र कश्मीरमा के भइरहेको देख्छौं, तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ कि त्यहाँ अझै मानिसहरू आफ्नो नागरिकताका लागि युद्ध गरिरहेका छन्। हङकङमा प्रजातन्त्रका लागि लड्ने लाखौंले किन सोशल मिडिया त्याग्छन् के तपाईंलाई थाहा छ? किनभने तिनीहरू एक भाषामा विश्वास गर्न सक्दैनन् जुन तिनीहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूको सरकारले उनीहरू भन्दा राम्रो बोल्दछ। र त्यसकारण उनीहरूले आफ्नै भाषा बनाए र विरोध रणनीति र कार्यनीति यस नयाँ सिन्ट्याक्समा संचार गरे। यो नागरिकताको लागी लडाईँको एक नवीन दृष्टिकोण हो।
आफ्नो अधिकार बचाउन हङकङका नागरिकहरूले (समानान्तर / समान) ठाउँहरू सिर्जना गरिरहेका छन् जहाँ लाखौं मानिसहरूले अब नयाँ रेजिस्टरमा कुरा गर्छन्। जहाँ तिनीहरू नयाँ, नवीन तरिकामा लडछन् र विरोध प्रदर्शन गर्ने ठाउँहरुमा केही मिनेटमा भेला हुन्छन् र छरिन्छन्। जहाँ उनीहरूले आफ्नै अनुप्रयोगहरू सिर्जना गरेका छन् र इलेक्ट्रोनिक मेट्रो-कार्डहरूको प्रयोग परिवर्तन गरेका छन्। तिनीहरूले आफ्नो फोनको सिम कार्ड परिमार्जन गरेका छन्। हङकङका नागरिकहरूले तानाशाही सूचना सञ्जालबाट आफूलाई जोगाउन सक्षम भएका छन्। यसले हामीलाई देखाउँछ कि राज्यले अझै नागरिकताको लडाइँलाई परास्त गरेको छैन।
काश्मिरको अर्को कथा छ। सूचना र संचार ब्ल्याकआउट केही हप्ताको लागि लागू गरियो। १ करोड भन्दा बढी व्यक्ति जुनसुकै सूचनाबाट काटिए। त्यहाँ इन्टरनेट बन्द थियो। मोबाइलहरू बेकम्मा भाँडो बनाइए। सरकारी अधिकारी प्रेसको काम गर्न लागे र प्रेस सरकारको काम गर्न थाले। के तपाईं जानकारी बिनाको नागरिक कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? के हुन्छ जब मिडिया जसको काम सूचना संकलन गर्ने, प्रोसेस गर्ने र रिले गर्ने हो, उसले सूचनाका सबै स्रोतहरु बन्द गर्ने विषयलाई समर्थन गर्छ? त्यसो गर्दा, मिडिया उनको वरिपरि संसारको बारेमा जान्न खोज्ने नागरिकको बिरूद्ध खडा छ – जिज्ञासाको कुराको रूपमा होइन, तर उनको बाँच्न र परिवारको हितको लागि।
जब मूलधारको पत्रकारिताले न त आफ्नै अधिकारलाई समर्थन गर्न सक्छ न पत्रकारिताको बृहत् विचारलाई, नागरिक पत्रकार र नागरिक पत्रकारिता दुबै एक स्थिर (अस्तित्वगत) खतरामा छन्। यहाँ खतरा केवल रिपोर्टिङ,, दर्शक वा आर्थिक निर्वाहको व्यावहारिक प्रभावमा मात्र होइन तर वातावरणमा पनि हो जुन यस्तो कपट र दिवालियापनको बृद्धि र पोषण गर्न सक्षम हुँदैन। यस्तो मिडिया – र म यकिनसम्म भन्न सक्छु कि यसको दर्शकहरु पनि – शुद्ध जानकारी र कडा तथ्यहरु संग खडा गर्न सक्दैनन्, यो संसारको जहाँसुकै होस्। यो यसका आधारभूत आदर्श र सिद्धान्तहरूबाट यति टाढा टाढा सारिएको छ कि यसको कल्पना गरिएको थियो, यो हुनेछ, र यो पहिले नै भएको छ, मैले भर्खरै सूचीबद्ध गरेको केसहरूमा विडंबना र त्रासदी देख्न असफल भयो।
यो उही मिडिया हो जसले आफ्नो लागि सञ्चालन लागत घटाउन “नागरिक पत्रकारिता” लाई प्रमोट गर्‍यो। यसले जोखिम तपाईँलाई आउटसोर्स गर्‍यो। मूलधारको पत्रकारिता भित्रका नागरिक पत्रकारिता मूलधारको पत्रकारिता भन्दा बाहिरका नागरिक पत्रकारिता भन्दा फरक छन्। सामाजिक मिडियाको शुरुआती दिनहरूमा जब मानिसहरूले अनलाइन कडा प्रश्नहरू सोध्न थाले, पुरानो स्कूलका मिडिया हाउसहरूले सोशल मिडियाको विरोध र आलोचना गर्‍यो।
न्यूजरूम भित्र ब्लग र वेबसाइटहरू ब्लक गरिएका थिए। आज पनि धेरै समाचार कक्षहरूले पत्रकारहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत विचार व्यक्त गर्न अनुमति दिँदैनन्। यद्यपि यो अर्को कुरा हो, जब २४ वर्षीया महिला ‘रिभरबेन्ड’ ले इराक युद्ध र यसको विनाशलाई दैनिक ब्लगको रूपमा कागजात दिन शुरू गरे जुन पछि २००५ मा पुस्तक बगदाद बर्निंग: गर्ल ब्लग फ्रम इराक प्रकाशित भयो, विश्वभरका प्रख्यात मिडियाहरूले स्वीकार गरे कि उनीहरूका रिपोर्टरहरूले पनि गर्न नसकेको काम यस अज्ञात केटीले सोसल मिडियाबाट गरिन्। आज यदि कुनै काश्मिरी केटीले बगदादलाई जलाउने तरीकाले ब्लग लेख्ने निर्णय गर्यो भने हाम्रो मूलधारको मिडियाले उनलाई राष्ट्रविरोधी भनेर चिनाउने छ।
मिडियाले आज नागरिक पत्रकारिताको ठाउँलाई डिलेजिटिमाइज गर्दैछन् किनभने यसलाई पत्रकारितामा रुचि छैन वा लगानी छैन। पत्रकारिताको भेषमा मिडिया आज राज्यको संस्थापक हो। मेरो विचारमा, जब मिडिया र मूलधारको पत्रकारिताले सूचनाको अवरोध गर्छ, नागरिक पत्रकारिता यो समयमा आवश्यक हुन्छ। जब सूचनाको लागि संघर्षलाई राष्ट्र-विरोधीको रूपमा वर्णन गरिएको छ, र असहमतिलाई देशद्रोहको रूपमा घोषणा गरिएको छ, ‘परीक्षण समय’ आज हामी कहाँ छौं त्यसका लागि नम्रतावादक युक्तिवाद हो।
जब मिडिया नागरिकको बिरूद्ध जान्छ, तब नागरिकहरुले मिडियाको भूमिका लिने समय आउँछ। राज्यको क्रूरता र निगरानीको समयमा यो सफलताको सम्भावना निकै कम छ भनेर थाहा पाएर उनले त्यसो गर्नु पर्‍यो। राज्य बढ्दो अस्पष्ट र जानकारी अवरुद्ध भइरहेको छ। मूलधारको मिडियाले अरू सबैभन्दा माथि नाफा अधिकतमको खोजी गर्दछ र यो एकल मनसायले राज्यको पीआर एजेन्टको रूपमा सेवा गर्न बाध्य गर्दछ। सरकारी विज्ञापन आज मिडियाको लागि आम्दानीको एक विशाल हिस्सा हो। अर्कोतर्फ नागरिक पत्रकारिता जनताको समर्थनमा पूर्ण रूपमा बाँच्न संघर्ष गरिरहेको छ, सरकारी संरक्षक र विज्ञापनदाताको सञ्जाल बाहिर रहेर।
भारतको मुख्यधारका मिडियाले हाम्रा नागरिकहरूलाई “उत्तर-निरक्षर” मा परिवर्तन गर्न रातदिन काम गरिरहेको छ। यसले अन्धविश्वासी मानिसहरूलाई तर्कसंगत सोच जीवहरूमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गर्न छोडिदियो। यसको पाठ्यक्रममा विचार नहुने राष्ट्रवाद र साम्प्रदायिकता रहेको छ। मुख्यधारको मिडियाले राज्यको कथालाई शुद्ध जानकारीको रूपमा लिन थालेको छ। टेलिभिजनमा असंख्य च्यानलहरू छन् तर यी सबै च्यानलहरूमा समाचारको तरीका र सामग्री समान छ। विपक्ष यो मिडिया को लागी एक अपमानजनक शब्द हो।
भारत एक महान राष्ट्र हो, र यसको शानदार प्रदर्शनहरू छन् जुन यसका लागि विश्वमा प्रख्यात छन्। यद्यपि यसको मूलधार र टेलिभिजन मेडियामा धेरैजसो कुकुरहरू लागेका छन्। भारतीय नागरिकहरू प्रजातन्त्रको लागि ठूलो उत्कटता राख्दछन्, तर हरेक रात समाचार च्यानलहरू त्यो जोशलाई कुल्चीमिल्ची गर्न आउँछन्। भारतमा घाम अस्ताउन लाग्दा साँझ आउन सक्छ, तर न्यूज मिडियाको रिपोर्टाजले रातको अन्धकार फैलाइसक्छ।
प्रजातन्त्र वास्तवमै जीवित छ र भारतका जनतामा लात हान्दै छ। दिनहुँ सरकारको बिरूद्ध आवाजबाजी प्रदर्शनहरू हुन्छन्, तर मिडियाको स्क्रीनिङ प्रक्रिया छ जसमा त्यसले यी प्रदर्शनहरुलाई उनीहरूको बुलेटिनबाट टाढा राख्ने निर्णय गर्छ। यी विरोधको कुनै रिपोर्ट छैन, मिडियाका लागि ती व्यर्थ गतिविधि हुन्। कुनै पनि प्रजातन्त्र सार्वजनिक प्रदर्शन विना प्रजातन्त्र हुन सक्दैन।
परिणाम स्वरूप, यी प्रदर्शनमा सामेल भएका व्यक्तिहरूले अब भिडियोहरू रेकर्ड गर्न थालेका छन्। उनीहरूको फोनमा रेकर्ड गरिएका यी भिडियोहरूमा ती पत्रकारहरूले आफैंको भूमिका खेल्छन्, उनीहरूले कार्यको दृश्यलाई ब्रेक-डाउन दिन्छन्, पछि प्रदर्शनमा सहभागीहरूको ह्वाट्सएप समूहमा भिडियोहरू साझा गर्छन्।
मिडिया द्वारा परिभाषित नागरिकमा राज्यको विरूद्ध नाराहरु उचाल्नको लागि अनुमति छैन। यसैले नागरिकहरूले उनीहरूको ह्वाट्सएप समुहका लागि भिडियोहरू सिर्जना गरेर उनीहरूको त्यो अत्यावश्यक अंश जोगाउन प्रयास गरिरहेका छन्। तिनीहरूले यूट्यूबमा आफ्नो भिडियो अपलोड गर्न शुरू गर्दै आन्दोलनकारीहरूले नागरिक पत्रकारिताको अभ्यास गर्न थाल्छन्। YouTube मा उनीहरूको भिडियोहरू अपलोड गरेर, आन्दोलनकारीहरू नागरिक पत्रकार भएका छन्।
जब राज्य र मिडिया नागरिकहरुलाई नियन्त्रण गर्न एकजुट हुन्छन्, के एक नागरिकले पत्रकारको रूपमा कार्य गर्न सक्षम हुन सक्छ? एक नागरिक बन्न र सम्बन्धित अधिकार प्रयोग गर्न, यसको लागि एउटा त्यस्तो प्रणाली आवश्यक छ जुन नागरिकले अधिकार गरेको समान प्रजातन्त्रद्वारा प्रदान गरिनु पर्दछ। यदि न्यायपालिका, पुलिस र मिडिया नागरिकप्रति वैमनस्य बन्न पुग्छ र राज्यको साथ जोडिएको समाजको भागले उनीहरूलाई समावेश नगर्न थाल्छ भने हामी कसरी प्रतिरक्षकले लड्न आशा गर्न सक्छौं? यद्यपि, नागरिक फिर्ता लडिरहेको छ। क्याक्टस जिउँदो आउँदैछ।
हरेक दिन म व्हाट्सएपमा पाँच हजारदेखि १० हजार सन्देशहरू प्राप्त गर्दछु, कहिलेकाँही अधिक। प्रत्येक दोस्रो सन्देशमा व्यक्तिहरू आफ्ना समस्याहरूको साथमा उनीहरूले पत्रकारिताको अर्थ के हो लेख्छन्। मूलधारका मिडियाले पत्रकारिता भनेको के हो बिर्सिसकेको हुन सक्छ, तर जनताले यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने भनेर सम्झन्छ। प्रत्येक चोटि जब म मेरो अफिस समूहमा अपडेटहरू जाँच गर्न मेरो व्हाट्सएप खोल्छु, म कहिलेसम्म यसलाई टाढा पनि बनाउँदिन।
जब सत्तारुढ पार्टीले मेरो कार्यक्रमको बहिष्कार गर्‍यो, सबै बाटोहरू ममा बन्द भए। त्यस समयमा यो ती व्यक्तिहरू थिए जुन मेरो मुद्दालाई उनीहरूको मुद्दाले भर्दछन्। मूलधारका मिडियाले नागरिक पत्रकारिताको नाममा पत्रकारिता र शक्तिको बिरूद्ध आवाज निकाल्दा पनि जनतामा काम गर्ने मिडियाको भ्रम कायम राख्ने क्रममा नागरिकहरूको यो समूहले मलाई मूलधारको मिडियामा नागरिक पत्रकार बनायो। यो मिडियाको भविष्य हो। यसका पत्रकारहरू नागरिक बन्नु आवश्यक छ त्यसैले मानिसहरू नागरिक बन्न सक्छन्।
सामान्य व्यक्तिहरू न्यूज च्यानलहरूबाट मेटिदै थिए र एकल राजनैतिक एजेन्डा उनीहरूको घाँटी तल झेलिरहेको थियो, केही व्यक्तिहरूले यस गठबन्धनलाई छोड्ने प्रयास गर्न छाडेनन्। सबै दुरुपयोग र धम्कीको बीचमा, सरकारमा माग गर्ने सन्देशहरूको संख्या बढ्न थाल्यो। म मान्छे को मुद्दाहरु द्वारा ट्रोल हुन थाले। “के तपाईं हाम्रो लागि बोल्नुहुन्न? के तपाईं सरकारसँग डराउनुहुन्छ?” तिनीहरूले मलाई सोधे, लगातार। मैले उनीहरूलाई सुन्न थालें। प्राइम टाइमको स्वभाव परिवर्तन भयो। हजारौं युवा पुरुष र महिलाले मलाई सन्देश पठाउन शुरू गरे। मेरो व्हाट्सएप नम्बर एक सार्वजनिक न्यूजरूम भएको छ। जब राजनीतिक पार्टीहरू र सरकारभित्रका मेरो गोप्य स्रोतहरूले मबाट आफूलाई टाढा गर्न थाले, जनता मेरो खुला स्रोत हुन।
मिडिया र सामाजिक मिडियाले भीड, भर्चुअल र वास्तविक बीचमा राखेर नागरिकहरूलाई अलग, शान्त र डराउने प्रक्रियामा योगदान पुर्‍याउँछ। जोखिम को धारणा बढ्दछ – र डर पक्षाघात को अनुभव। आजका नागरिकहरू ठूलो दबाबमा छन्। उनीहरूको अगाडि चुनौती भनेको यो मिडियाको बिरूद्ध कसरी लड्ने भनेर पत्ता लगाउनु हो, जसले तिनीहरूको नाममा यसको व्यवसाय चलाउँछ।
हामी त्यस्तो बेलामा छौं जब मानिसहरूले सरकारमा पुग्न चाहेमा मिडियाको अवरोधका बिरूद्ध दबाब दिनुपर्नेछ। अन्यथा उनीहरूको आवाजले व्हाट्सएप ईनबक्सहरूलाई सताउन जारी रहन्छ। जनताले पहिले नागरिक बन्नुपर्नेछ र त्यसपछि राज्यलाई सम्झाउनु पर्छ कि यसको कर्त्तव्यले नागरिकता फस्टाउन सक्ने निडर वातावरणको सिर्जना र पालनपोषण पनि गर्छ।
राज्यले प्रश्न गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि सरकार जिम्मेवार छ। तपाईं एक सरकार मात्र मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ जब मिडिया स्वतन्त्र र यसको समयमा स्वतन्त्र हुन्छ। जानकारी पछि, आक्रमण अन्तर्गत अर्को लाइन मा इतिहास हो, जो हामीलाई हाम्रो शक्ति र हाम्रो प्रेरणा दिन्छ। त्यो इतिहास हामीबाट खोसियो।
कुनै राष्ट्र समाचार बिना अस्तित्वमा हुन सक्दैन। एक समुदायको रूपमा राष्ट्र आयो किनकि हामी आफैले सोचेको ती कथाहरूले हाम्रो कल्पनालाई थाक्यो। हरेक देश फरक छ। जिज्ञासा – र चासो – अरुको हितको लागि, र विशेष गरी हामी बीचमा कमजोरले स्वतन्त्रताको लागि हाम्रो संघर्षलाई विशेष बनायो। यो कुनै पनि राष्ट्रको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ जुन जानकारी वास्तविक हुन्छ। यदि जानकारी सत्य र वास्तविक छैन भने, नागरिकहरू बीचको विश्वास कम हुनेछ। र यसैले नै नागरिक पत्रकारिताको लागि फेरि आवश्यकता छ: पत्रकारिता जुन मुख्यधारका मिडियाको व्यापार रणनीतिबाट स्वतन्त्र छ।
निराशाको समयमा पनि त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले यो खाली ठाउँ भर्न कोशिश गरिरहेका छन्। हास्य कलाकारहरूबाट यूट्यूब च्यानलहरूमा उनीहरूले पत्रकारिताको सारलाई जीवित राख्न खोजेका छन्: नागरिकको सेवामा नागरिकताको अभ्यास। यो उनीहरूको शक्ति र दृढ संकल्प हो जसले भारतको लोकतन्त्रमा सबैलाई एकतर्फी हुन दिदैन। हुनसक्छ तिनीहरूले युद्ध जितेका छैनन् (अझै), मानिसहरूले लडाई गर्न जारी राखेका छन्। हामीलाई आजको समयमा नागरिक पत्रकारहरूको तत्काल आवश्यकता छ तर हामीलाई सिटिजन डेमोक्र्याक्टिक चाहिन्छ भन्दा पनि बढी।
1 thought on “अधिकांश मूलधारे मिडिया र टिभी कुकुरहरुको हातमा गएको छ, पत्रकारिता के हो बिर्सिसकेको हुनसक्छ : रविशकुमारको म्यागासेसे अवार्ड स्पिच”
भारतीय मूलधारका मिडियाहरु मोदीवादमा ग्रसित छन् । उनीहरुको समाचार सुन्न र हेर्न मलाई मनै लाग्दैन । किनकि एकहोरो प्रोपोगान्डाले भरिएका समाचार लाग्छन् । स्वतन्त्र पत्रकारितामा दिईने समाचार नै हुदैन । एकोहोरो कराएको छ । खासै सन्तुलित पत्रकारिताको गन्ध आउदैन । बरु वि वि सी, अल जाजिरा अनि सि एन एन हेर्दा पो केही बुझन सकिन्छ । भारतीय मूलधारका मिडियाहरु पहिला जति हेरिन्थ्यो, अहिले त हेर्दा पनि दिक्दारी लाग्दो देखिन्छ । जुन त्यहाँका स्थानीय पत्रकारहरुले पनि महसूस गरेको कुरा रैछ ।